चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने साढे १९ मेगावाट विद्युतको पिपिए गर्दै प्राधिकरण - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ ०२, २०७५ 4110 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने साढे १९ मेगावाट विद्युतको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ । उखुको खोस्टा (बगास) बाट विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति लिएका रिलायन्स, इन्दुशंकर र एभरेष्ट चिनी उद्योगसँग पिपिए गर्न लागिएको हो ।
पहिलो चरणमा १५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न बाराको रिलायन्स चिनी उद्योगसँग पिपिए गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार रिलायन्ससँग २ साताभित्र पिपिए सम्पन्न हुनेछ ।
रिलायन्सले सुख्खा यामको ४ महिना प्राधिकरणको प्रणालीमा १५ मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने छ । यो उद्योगले यसअघि प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) गरिसकेको छ ।
दोस्रो चरणमा सर्लाहीको इन्दुशंकर र धनुषाको जनकपुरस्थित एभरेष्ट चिनी उद्योगसँग पिपिए गरिने भएको छ । इन्दुशंकरले ३ मेगावाट तथा एभरेष्टले साढे १ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ ।
यी चिनी उद्योगले पिपिए भएको एक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गर्नु पर्नेछ । उत्पादन सुरु गर्न नसके अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
हिउँदको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न २०७२ जेठ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकले चिनी उद्योगबाट विद्युत सहउत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार इच्छुक उद्योगसँग करार सम्झौता गरी विद्युत सहउत्पादन गर्ने निर्णयअनुसार प्राधिकरणले पहिलो चरणको पिपिए गर्न लागेको हो ।
विद्युतको माग र उद्योगको आग्रहलाई ध्यान दिँदै सरकारले यस्ता उद्योगबाट विद्युत खरिद गर्न करार सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । चिनी उद्योगले उखुको खोस्टा (बगास) बालेर उमालेको पानीको बाफले टर्बाइन घुमाएर विद्युत उत्पादन गर्छन् ।